Technical Support - MMITSG
Building(14), 4th Floor, MICT Park,
PHONE +959 9543 54445
.mm Domain Checker
Buy Design Template-1
Buy Design Template-2
Buy Design Template-3
Hosting ဝယ်ပြီးရင် account activate ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ?
MMITSG မှာ Credit/Debit Card နဲ့ Online ၀ယ်ထားတယ်ဆိုရင် Transaction Successful ဖြစ်တာနဲ့ ၄ နာရီအတွင်းမှာ Hosting Account Setup E-mail ရပါမယ်။ MMITSG Hosting ရဲ့ Office မှာ ၀ယ်တယ်ဆိုရင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီးတာနဲ့ ၁၅ မီနစ် အတွင်းမှာ Setup E-mail ရပါမယ်။
Domain and Hosting ကို တခြား Hosting မှ MMITSG သို့ပြောင်းရွှေ့လာလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ MMITSG မှ Hosting Transfer Team မှအစအဆုံးကူညီပေးမှာပါ။ Hosting Transfer က MMITSG အတွက် Easy Cake ပါ။ အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်၏ Hosting အဟောင်း account ထဲမှ file များအားလုံး၊ Database များကို Download/Backup လုပ်ပြီး MMITSG ရဲ့ သင့် Hosting မှာပြန် Upload လုပ်တာပါ။ Download/Backup လုပ်ရာတွင် သင်၏ Hosting အဟောင်းက cPanel သုံးပါက cPanel Account Transfer တိုက်ရိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သင်၏ Hosting အဟောင်းက SSH Access ရှိပါက (သို့) Files များကို Zip လုပ်နိုင်ပါက Zip လုပ်ပြီး MMITSG တွင် Unzip လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာသင့်၏ Website က CMS များဖြစ်သော Joomla, Drupal, SMF, etc.. များသုံးထားပါက Configuration File ကို New Hosting Environment အတိုင်း Update လုပ်ပေးရမှာပါ။
Domain Transfer လုပ်ရာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လူတော်တော်များများ မျက်စိလည်ကြတဲ့အချက်ပါ။ Domain Transfer ဆိုတဲ့ term က Domain ကို Domain Register တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းတာပါ။ အဲ့ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ လက်ရှိ Register မှာ Authorization Code လိုပါတယ်။ Domain Secret Code/Key လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Code ရပြီဆိုရင်တော့ MMITSG ရဲ့ Register ကို Transfer လုပ်လို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်နည်းက FAQ No.5 မှာရှင်းပြထားသလို Domain ကို တခြား Company မှာထားခဲ့ပြီး Hosting ကိုပဲ MMITSG ကို Transfer လုပ်တာပါ။ ဒါကိုတော့ Domain Transfer လို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့။ Domain Pointing ပဲလုပ်တာပါ။ MMITSG Hosting မှ Domain/Hosting ပေါင်းများစွာကို အပတ်စဉ် Transfer လုပ်နေသောကြောင့် သင်၏ Domain/Hosting ကိုလည်း MMITSG မှ လွယ်ကူစွာ လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
MMITSG Hosting တွင် Credit card / Debit card နှင့်ဝယ်လျှင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
Customer Address သည် Card ၏ Billing Address ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Card ၏ Billing Address ဆိုသည်မှာ Card holder (Card ပိုင်ဆိုင်သူ) ၏ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် Card အသုံးမပြုနိုင်၍ သူများ Card အား အသုံးပြုခွင့်ရ၍ အသုံးပြုခြင်း (သို့) Company Card များသုံးပါက First name နှင့် Last name သည် Card Holder ၏ First name နှင့် Last name ဖြစ်သည်။
Post Code/Zip Code ရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်ပါက ဖြည့်စွက်ပါ။ မရှိပါက '-' အတိုင်းသာထားပါ။
First name, Last name များ၊ လိပ်စာများ မှားယွင်း ဖြည့်စွက်ပါက Credit/Debit Card details များ မှန်ကန်သော်လည်း Transaction Failure ဖြစ်ပါမည်။
MMITSG Hosting မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ support team မှ အခမဲ့ Technical Support ပေးနေတာပါ။ MMITSG Hosting မှ ဝယ်ယူထားသော Domain များ၊ Hosting များ၊ Server ပြသနာများ၊ Hosting account upgrade ပြုလုပ်ချင်းများ၊ Renew လုပ်ချင်းများ အားလုံးအတွက် Support ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
Building(14), 4th Floor,
Copyright © 2019, Myanmar IT Support Group. All Rights Reserved. | Developed by: MMITSG